မြန်မာစစ်ကောင်စီက ငှားရမ်းထားတဲ့ အစ္စရေးသူလျှိုဟောင်း — မြန်မာဌာန
မြန်မာစစ်ကောင်စီက ငှားရမ်းထားတဲ့ အစ္စရေးသူလျှိုဟောင်း
ကနေဒါနိုင်ငံ Montreal မြို့က စီးပွားရေးအကြံပေးလုပ်ငန်း လုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့ လက်နက်ပွဲစားနဲ့ အစ္စရေး သူလျှိုလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Ari Ben- Menashe ကို လော်ဘီကြားပွဲစားအဖြစ် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက ဌားရမ်းထားတယ်ဆိုတာ ဟုတ်မှန်တယ်လို့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက မနေ့က အတည်ပြု ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာတွေ တန်းသိတဲ့ မွေးစားစကား လော်ဘီကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ သန်းနဲ့ ငှားရမ်းလိုက်တာပါ။ လော်ဘီဆိုတာ လွှတ်တော်အမတ်တွေကို သူ့အမှုသည်လိုတဲ့အတိုင်း ရအောင်ကြားက ဆွယ်ပေးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီက ခန့်အပ်ထားတဲ့ ကာကွယ်ရေးဌာန ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးနဲ့ Ben- Menashe မနာရှီရဲ့ Dickens and Madson ကုမ္ပဏီတို့ လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ စာချုပ်ကို အမေရိကန်တရားရေးဌာန အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာလည်း ဖော်ပြပါတယ်။
စစ်အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက်က လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတွေကြောင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ထားတာတွေကို ဖြေလျှော့ရအောင် သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်လက်ထက် ၂၀၁၅ ဧပြီမှာ ဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် Podesta အုပ်စုကို လော်ဘီလုပ်ပေးဖို့ တနှစ်စာ ငှားရမ်းချိန်က ဒေါ်လာ ၈၄၀၀၀၀- ရှစ်သိန်း လေးသောင်း ပေးခဲ့ရတာထက် ခုပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်ခက ပိုများနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရင်ကြားစေ့တဲ့ သတင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံ အပြောင်းအလဲ အရိပ်အယောင်တွေကြောင့် ငှားရကျိုးနပ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပြီး အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်လာပါတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နဲ့ ၂၀၁၆ မှာ NLD ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရတက်လာနိုင်ပေမဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို မကျေနပ်တာ အကြောင်းပြလို့ ဒီနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှာ စစ်အာဏာသိမ်း လိုက်ရုံမက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြသူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်း၊ စစ်အာဏာကို ဆန့်ကျင်သူတွေကို ဖမ်းဆီး၊ တချို့လည်း ဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာ သေဆုံးစတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် လမ်းပွင့်နေတဲ့ စီးပွားရေး ထပ်မံပိတ်ဆို့ခံရမယ့်အရေး ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ လော်ဘီငှားရမ်းတာလို့လည်း သုံးသပ်ကြပါတယ်။
အီရန်မှာ ၁၉၅၁ ခုနှစ်က မွေးဖွားတဲ့ Ben –Menashe ဟာ အစ္စရေးလူမျိုး ကနေဒါက စီးပွားရေးသမားလို့ ပြောပေမယ့် ၁၉၇၇ ကနေ ၁၉၈၇ ခု ထိ အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပြီး လက်နက်ပွဲစားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ အမေရိကားက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်တာကို ဘယ်လိုကျော်လွှားရမလဲဆိုတာ စစ်ကောင်စီကို အကြံပေးမယ့် အကြောင်း လော်ဘီတွေကို စောင့်ကြည့်တဲ့ Foreign Lobby Report ပြောတယ်လို့ သူလျှိုတွေအကြောင်း ဖော်ပြတဲ့ Spy Talk online ဆောင်းပါးက မတ် ၁၁ ရက်က ဖော်ပြပါတယ်။
စစ်ကောင်စီက အားကိုးတကြီးနဲ့ ငှားရမ်းလိုက်တဲ့ လော်ဘီဟာ သမိုင်းကြောင်း ကောင်းတဲ့လူ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ သူဟာ အစိုးရတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ယုံလွယ်တတ်သူတွေကို လှည့်ကွက်တွေနဲ့ အသုံးချတတ်တဲ့လူလို့ ပြောပါတယ်။
ဒေါ်လာ ၃၆ သန်းဖိုးရှိတဲ့ အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်သုံးစင်း အီရန်ကို ရောင်းချဖို့ ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်က နယူးယောက်မှာ စွဲချက်တင် ခံရဖူးပါတယ်။ အမေရိကန်လက်နက်တင်ပို့မှု ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းပေမယ့် အစ္စရေး ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ဖြစ်ပြီး အစိုးရအတွက်လုပ်ရတာလို့ အလျှောက်ကောင်းလို့ တနှစ်နီးပါးအကျဉ်းကျနေရာက ပြစ်ဒဏ်လွတ်သွားဖူးပါတယ်။
Reuters သတင်းက ဒီလ ၆ ရက်မှာ တယ်လီဖုန်းနဲ Ben-Menashe မနာရှီကို ဆက်သွယ်တဲ့အခါ အမေရိကန်နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ရေး ကူညီဖို့အတွက် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက ငှားရမ်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ စစ်အာဏာ သိမ်းပြီးတဲ့နောက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ နိုင်ငံရေးအားမသန်ဘဲ အမေရိကားနဲ့ ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဖို့ ကြိုးပမ်းပြီး တရုတ်နဲ့ ခပ်ခွာခွာနေချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ လော်ဘီ Ben-Menashe ဟာ Paul LeRoux ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဆိုက်ဘာ ဖောက်ထွင်းရေးသမား ရာဇဝတ်ကောင်လည်းဖြစ်၊ အမေရိကန်မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အတွက် သတင်းပေးအဖြစ် ၂၀၀၇ နဲ့ ၂၀၀၈ မှာလုပ်ဖူးသူအတွက်လည်း ပွဲစားလုပ်ဖူးပါတယ်။ Paul LeRoux က သူ့မိတ်ဆွေ နာမည်ဆိုးထွက်တဲ့ ဇင်ဘာဘွေ သမ္မတ မူဂါဘီကို ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းပေးဖို့ ဘင်မနာရှီကို ငှားရမ်းဖူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Paul LeRoux ဟာ သြစတေးလျ၊ တောင်အာဖရိကနဲ့ ဇင်ဘာဘွေ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေ ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ပြီး လူသတ်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုကူးမှု၊ လက်နက်မှောင်ခိုမှု၊ ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းထောင်မှု၊ လိမ်လည်မှုတွေ ကျူးလွန်သူဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကားကို မူးယစ်ဆေးဝါးသွင်းမှုမှာ ကြံရာပါအဖြစ် ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာမှာ ဖမ်းဆီးခံရပြီး မနှစ်က ဇွန်လမှာ ထောင် ၂၅ နှစ်ကျခံဖို့ အမိန့်ချမှတ်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရာဇဝတ်ကောင်တွေ၊ နာမည်ဆိုးထွက်တဲ့ အစိုးရတွေ၊ နာမည်ပျက်ရှိတဲ့ လူတွေအတွက် မြန်မာစစ်ကောင်စီက ငှားရမ်းတဲ့ လော်ဘီက ဝန်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ Spy Talk ကဖော်ပြပါတယ်။
Burmese army without any good reputation hired someone with bad reputation? Nothing surprising!
There was found waste money of Myanmar people. This would not be help for military terrorist group.